F-35: Wax ka Ogow Sababta Diyaaradda Dagaal Ee Mareykanka U tahay Midda Ugu Fiican | Gaaroodi News
Diyaaradda F-35 ayaa waxay sameynteeda qaadatay in ka badan 15 sano
Markii maamulka Madaxweyne Bill Clinton uu la yimid fakradda diyaarad dagaal sanadkii 1995, waxay xal u ahayd dhammaan caqabadaha milatariga.
Hadafku wuxuu ahaa in la sameeyo diyaarad milatari oo dalku leeyahay si ay howlgalo kala gaar gaar ah ugu fuliso saddex cutub oo milatariga Mareykana ka tirsan.
Ciidamada Cirka ayaa beddelkii diyaaradda dagaalka F-16 waxay diyaaraddan u adeegsan doonaan duqeymaha cirka iyo kuwa dhulka.
Ciidamada badda ayaa u adeegsan doona diyaaradda xojinta weerarrada maraakiibta sida diyaaradaha dagaalka. Qof kastana, oo ay ku jiraan xulafada Mareykanka ayaa u adeegsan doona dhanka sirdoonka.
Mrakii hore waxaa jiray kuwo u maleynayay in diyaaradda dagaalka ay tahay riyo iyo mashruuc diyaarad qura looga filanayo waxyaabo badan isla markaana uusna guuleysan doonin.
Mashruuca lama bilaabi lahayn hadii ay kordhi lahayd hanjabaadaha milatariga, balse markaas Midowgii Soofiyeetka ayaa burburay dakhliga Shiinaha ayaana ahaa boqolkiiba 3, sidaas darteed mamaulka Madaxweyne Clinton ayaa go’aansaday inay tallaabo qaadaan.
Boqollaal diyaaradaha f-35 ah ayaa haatan ka howlgala in ka badan 10 saldhigyo milatari oo dunida ku yaalla.
Muddo dheer ayay qaadatay inuu guuleysto mashruucaas, balse ugu dambeyn wuu hirgalay.
Waxay noqotay mid ka mid ah diyaaradaha ay teknolojiyaddda injineeriyaddooda uu aad u sarreeyo kaddib Dagaalkii Qaboobaa ee dunida. Xaqiiqdii diyaaradda waxay caddeyn u tahay anshaxa iyo khibradda waaxda hawada ee Mareykanka.
Si kastaba, haddii aadan si dhow ula socon qorshaha F-35, waxaa laga yaabaa inaadan wax bada ka ogaan.
Madxaweyne Trump ayaa xilka qabtay isaga oo aan wax badan ka fahansaneyn F-35, wuxuuna si tartiib tartiib ah u soo fahmayay muhiimadda ciidamada isku dhafan.
Balse maxaa diyaaradda F-35 ka dhigaya mid ka duwan kuwa adduunka?
Uma muuqato cadowga. Markii diyaarad F-35 ah ay ka qeyb galeyso tababar, waxay mar walba iska caabisaa diyaaradaha cadowga ku ah iyadoo ku dhaafeysa 20 iyo 1.
Isla sidoo kale ayay sameyn doontaa dagaalka ka dhanka ah ciidamada Ruushka iyo Shiinaha, sababtoo ah waxaa loo sameeyay inay dhuuqdo amaba iska celiso tamarta raadaarka, sidaas darteed wadayaasha diyaaradaha cadowga ma arki karaa kahor inta aysan weerar ku qaadin.
Waxaa intaas dheer, F-35 wuxuu leeyahay hannaan khiyaamaya amaba dhaafaya raadaarka diyaaradaha cadowga, cirka iyo dhulka.
Raadaarrada ayaa meel fog shey ka aqoonsan kara, balse ma baadi goobi karaan amaba ma weerari karaan F-35.
Sidoo kale, matoorka diyaaradda wuxuu awood u leeyahay inuu yareeyo kulka kahor inta gantaallada klka raadiya aysan weerarin.
Wey ka weyn tahay keliya diyaarad dagaal. F-35 ma aha keliya diyaarad dagaal balse sidoo kale waa mid muddo jiri karta.
Shaqooyinkeeda, waxaa ka mid ah inay awood u leedahay inay nadiifiso hawada diyaaradaha cadowga ee qalqalka gelin kara ciidamada Maryekanka. Waxay sidoo kale weerari kartaa ayna burburin kartaa deegaannada bartilmaameedka ah ee dhulka amaba badda iyadoo adeegsaneysa bambooyin iyo gantaallo kala duwan
Balse taasi waa uun billow. Hannaanka xog-uruurinta ee F-35 ayaa xogta sirdoonka ka uruurin karta una qeybin karta meelo kala duwan.
Awoodda ay u leedahay inay is hor taagto hannaanka diyaaradaha kale iyo qalabkeeda hawada ayaa diyaaraddan ka dhigaya mid ka sarreysa diyaaradaha kale ee dagaalka.
Waxaa sii dheer wwoodda ay u leedahay in wadayaashu ay ku dejin karaan meel walba iyo qaab walba iyadoo awoodda inay qaaddo hubka nukliyeerka